🥇 ▷ Waa maxay Galileo sideese u shaqeysaa? Aynu & # 039; s aragno sababta ay muhiim ugu tahay casriga casriga ah ✅
Waa maxay Galileo sideese u shaqeysaa? Aynu & # 039; s aragno sababta ay muhiim ugu tahay casriga casriga ah
Waxaa lagu magacaabay sharaf Galileo Galilei, cilmiga astronomer-ka talyaaniga iyo saynisyahannada, nidaamka meelaynta dayax gacmeed waxaa dalacsiiyayMidowga Yurub waxay u fidisaa si kale oo loo badalayo GPS taasi waa Nidaamka meelaynta Caalamka ee ay xayeysiisay Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Mareykanka iyo GLONASS ee Ruushka (oo soo noqday 100% hawlgal sanadkii 2011).
Waa maxay taariikhdeeda, sidee nidaamka loo qorsheeyay ka dibna loo dhex galiyo dhisme, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya sidey u shaqeysaa mustaqbalkeeduna muxuu noqon doonaa? Aynu ogaano dhammaan waxyaabaha ku saabsan tikniyoolajiyaddan xiisaha leh ee sii kordheysa u arki doona dhammaan aaladaha casriga ah ee iskuxiran.
Waa maxay Galileo: taariikh
Galileo waa meeleynta satalaytka madaniga ah iyo nidaamka maraakiibta ee mar la filan karo halkii laga daahi lahaa. Waxay ahayd in la hawl galiyo dhamaadka sanadka 2019 laakiin waxaa la go’aamiyay taarikhdu markay tahay 15ka Diseembar 2016, in kasta oo aan wali si buuxda loo hawl gelin.
Mashruucan waxaa la bilaabay May 26, 2003 iyada oo heshiis ay wada galeen Midowga Yurub iyo Wakaaladda Hawada Yurub (ESA). Talyaaniga iyo Faransiiskuba waxay ahaayeen waddamada sida ugu wanaagsan isla markaaba, sida ka soo horjeedda Jarmalka iyo Ingiriiska, kuwaas oo doorbidi lahaa inaysan “khasaarin” balaayiin yuuro, iyadoo la siin lahaa inay sii wadi lahaayeen isticmaalka GPS-ka.
Wixii ka dambeeyay 11kii Sebtembar 2001 Mareykanku wuxuu weydiistey Qarniga Hore inuu joojiyo mashruucan, iyadoo natiijada ka soo baxda la wada gaarsiinayo dhammaan ummaddi si wanaagsan. Muddo sanado ah, Shiinaha iyo Israa’iil waxay ku maalgeliyeen ku soo biiritaanka mashruuca. In ka badan 3 bilyan oo yuuro ayaa lagu kharash gareeyay bilawga dhulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Ku tiri wadar ahaan 26 satalayt (24 + 2 firaaq) dhismahaas oo dhererkiisu yahay 23925 km oo dherer ah oo leh ujeedo ah 56 digrii marka loo eego diyaaradda bariga dhulka ka dib orbitalka dhexdhexaadka ah ee dhulka si ay u bixiyaan qeexitaan sax ah oo cabbir ah dhowr sintimitir saddexda jiho.
Sida nidaamka Galileo u shaqeeyo
Galileo wuxuu sii wadayaa inuu bixiyo iskuduwaha juqraafiyeed Longitude, latitude iyo dherer lagu daro xawaare nooc kasta oo go’an ama mobiil dhulka ama xitaa jawiga, sidaa darteed duulimaad.
Satellites-ka ayaa leh muddo go’an oo ah 14 saacadood iyo 4 daqiiqadood oo celcelis ah 10 maalmood oo dhulka ah. Waxaa jira wadar ahaan 30 satalayt, 27 shaqeynaya oo loo qaybiyay 9 diyaaradda orbital kasta iyo 3 wixii beddelaad ah. Waxay cabbiraan 2.7 x 1.2 x 1.1 mitir, culeyskoodu yahay 700 garaam waxayna leeyihiin qiyaas nololeed qiyaastii 12 sano. Xawaaraha gudbinta xogta waxay leedahay tiro balaaran oo ah 50 sps ilaa 1000 sps.
Sanadkii 2011 dayax gacmeedyadii ugu horreeyay ayaa la galiyay orbitalka, sanadkii 2004 waxaa heshiis lala galay wadanka Mareykanka si loogu hirgaliyo nidaam isbadal oo la yiraahdo Binary Offset Carrier 1.1 (BOC 1.1) ee gudbinta isku gudbinta GPS-ka isla markaana aan faragalin gaar ah lagu sameynaynin mabda’a. is dhexgalka iyo is waafajinta.
Sanadkii 2017 howsha ugu horreysa ee iswaafajinta waxaa soo saaray Qualcomm, nooca koowaad ee Android la jaan qaada wuxuu ahaa Nougat (7.0), taleefanka casriga ah wuxuu ahaa BQ Aquaris X5 Plus, Apple waxay ahayd iPhone 6s, waxaan sidoo kale xusi karnaa Samsung Galaxy S8 iyo Nokia 8.
Farqiga u dhexeeya Galileo iyo GPS
The kala duwanaanshaha GPS waxaa ka mid ah saxsanaan weyn, hoos udhaca ilaa latitude sare ama ka sarreeya 75 digrii, helitaanka weyn ee aagagga magaalooyinka iyo ballanqaadka inaan la dumin doonin iyada oo aan digniin loo helin sida horeyba ugu dhacday GPS haddiiba ay jiraan dagaallo. Intaa waxaa sii dheer, waxay u saamixi doontaa helitaanka xogta ceyriinka iyo daacadnimada la hubo.
Si kastaba ha noqotee, labada nidaam – sida horey loo soo sheegay – waxay awoodi doonaan inay iska kaashadaan hubinta hubinta iyo cabiraadda saxda ah, gaar ahaan meelaha dadku aad ugu badan yihiin. Waxay meesha ka baxaysaa iyadoo aan la sheegin in labadaba ay isticmaali karaan labadaba rayid iyo milatariga labadaba.
Sidee Galileo loo isticmaalaa
The Nidaamka Galileo kaliya maahan wax ka qabashada gudaha, hawada, wadada, tareenka, maraakiibta badda iyo dadka lugeynaya, laakiin waxay sidoo kale la socotaa ilaalin, cabiraada ujeedooyinka sayniska ama injineernimada, sidoo kale waxay soo dhaweynayaan meelaha taabanaya waaxda Tamarta, isgaarsiinta, dalxiiska iyo beeraha.
Ka mid ah adeegsiga aan cadayn waxaa ka mid ah tusaale ahaan mid ku saabsan saacadaha atomiga ah ee fududayn kara isku-xirnaanta khadadka korantada ee gudbinta tamarta korantada ee sidoo kale gacan ka geysanaya dayactirka. Waxay awood u yeelan doontaa in lagu aqoonsado dadka dhibaatada ku jira iyo xaaladaha degdegga ah ugu dambeyntiina waxaa loo adeegsan karaa in laga sameeyo khariidad badeed iyo tas-hiilaad iyo sidoo kale meelaha ugu badan ee aan la gaari karin sida kaymaha waaweyn.